जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार
चैत्र १७, २०७७ राजाराम गौतम
आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउने रहर कसलाई पो हुन्छ र ? तर, आज हामी नेपाली पत्रकार जुन अवस्थामा छौं, यहाँनेर छारो उडाएर मात्रै पुग्दैन । शरीरमा पत्र–पत्र परेर बसेको मयल कोतरेर पखाल्न ढिलो भइसकेको छ । पत्रकारको शरीरमा थुप्रिएको यो फोहोर पखाल्न जति ढिलो हुन्छ, यसले त्यति धेरै दुर्गन्ध फैलाउनेछ ।
नेता, कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनका त्रुटिहरू उधिन्दै धूवाँदार प्रश्न उठाउने हामी पत्रकारले आफैंमाथि निर्मम हुने समय आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चुन्ने यो अवसर यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको वेबसाइट (एफएनजेडटओआरजी) का अनुसार, यो संस्थामा १३ हजारभन्दा बढी पत्रकार आबद्ध छन् । यसपटक ती सबै सदस्यले चैत २५ गते नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गर्दै छन् ।
पत्रकार चुन्ने प्रणाली सुधारिएको अवश्य छ, तर चुनाव प्रवृत्तिगत रूपमा यसअघिका भन्दा भिन्न हुनेछैन । एउटा गोजीमा पार्टी सदस्यता र अर्कोमा प्रेस कार्ड बोकेका, नेताबाट अनुमोदित ‘पत्रकार’ हरूबीच नै नयाँ नेतृत्वका लागि घम्साघम्सी पर्नेछ । विगतका तुलनामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज केही बढी मुखरित छ, तर त्यसले चुनावी नतिजामै केकति हस्तक्षेप गर्ला ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
चुनावपछि उही पुरानै दृश्य दोहोरिनेछ । पत्रकारको नयाँ नेतृत्वले जितको आशीर्वाद थाप्न आफूसम्बद्ध पार्टीका शीर्ष नेताका घर र पार्टी कार्यालय चहार्नेछ । आज पत्रकारको नेतृत्व हत्याउन सफल तिनैले भोलि महत्त्वपूर्ण सरकारी ओहदाको नियुक्ति हात पार्नेछन् । अहिलेसम्म यस्तै हुँदै आएको छ । र, दोहोरिने सायद यस्तै हो ।
पत्रकारका नेताहरू पेसागत सुरक्षा र श्रमजीवी अधिकारका कुरा गरेर थाक्दैनन् । तर, ती कुनै पार्टी या नेताविशेषको छहारीमा आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् । एउटा कुशल सम्पादक अथवा गतिलो रिपोर्टर हुन जति चुनौती छ, नेताको सिँढी चढेर नियुक्तिको पुरस्कार पाउन त्यति कठिन छैन । सायद त्यसैले धेरैजसो पत्रकार कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्, नेतानिकट हुन चाहन्छन् ।
विज्ञता/क्षमता भएका पत्रकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पाउनु अस्वाभाविक होइन । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई सल्लाहकार बनाउने जुन चलन चलेको छ, त्यसले ‘वाचडग’ को भूमिका नेताको चौकीदारमा सीमित गरिदिएको छ ।
पेसागत मर्यादा यसरी रसातलमा पुग्दै गर्दा महासंघको नेतृत्व लिने होडमा लागेका पत्रकार–नेताका मुद्दा के हुन् ? प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, श्रमजीवीका अधिकारहरूको सुनिश्चितता, व्यावसायिक पत्रकारिता, लोकतन्त्र आदि केही सनातनी मुद्दाबाहेक नेतृत्वका आकांक्षीसंँग पत्रकारिता उत्थानको कुनचाहिँ नवीन सोच छ ? यी बासी कुराबाहेक उनीहरू नयाँ के भनिरहेछन् ? यति बेला छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।
व्यवसायिक सञ्चार क्षेत्रको बजार संकुचित हुँदै जानु अहिलेको सबैभन्दा मुख्य संकट हो । अर्कोतर्फ अहिले अपारदर्शी लगानीको ओइरो लागेको छ र मिडियाको संख्या बढ्दो छ । तर मिडिया ‘कन्टेन्ट’ को गुणस्तर र विश्वसनीयताचाहिँ घट्दो छ । पत्रकारिताले बेहोर्दै गरेको संकट र यसको समाधान महासंघको नेतृत्वका आकांक्षीको कार्यसूचीभित्र कहीँकतै देखिँदैन । देखिन्छ भने खालि पार्टीकै सिको, नेतृत्व हत्याउने दाउ र स्वार्थ समूहबीचको गठबन्धन ! यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका बीच एउटा कुनाबाट पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज पनि उठेको छ, जसमाथि यति बेला थप विमर्श बढाउनु म जरुरी देख्छु ।
नेपाली मिडियाको सबैभन्दा ठूलो दोष प्रोपगान्डा र पत्रकारिताबीचको भेद छुट्याउन नसक्नु हो । पार्टी प्रोपगान्डा पनि पत्रकारितामै गणना हुने गर्छ, जबकि यी दुई पृथक् विषय हुन् । पत्रकारिता र प्रोपगान्डाका आ–आफ्नै चरित्र र सीमारेखा हुन्छन् । त्यस्तो सीमारेखा खिच्न अब विलम्ब गरिनुु हुन्न । कुनै पत्रकारले एउटा हातमा पार्टीको झन्डा र अर्को हातमा निष्पक्ष पत्रकारिताको कलम एकैसाथ कसरी बोक्न सक्छ ?
पत्रकारलाई राजनीतिक आस्था बोक्ने छुट हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, पार्टीको सदस्यको शपथ खाँदै निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिताको डिङ हाँक्न सुहाउँदैन । पत्रकारले कुनै दलमा आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । आबद्ध हुन सक्छन्, तथापि तिनले छाती पिटेर ‘फलानो पार्टीको वकालत गर्छु, पत्रकारिता होइन’ भन्न सक्नुपर्छ । व्यावसायिक पत्रकारिता र मर्यादाको कुरा गर्ने अनि पार्टी र नेताविशेषको पिछलग्गू हुने कर्म पत्रकारिता हुन सक्दैन । त्यो निश्चित समूहको आग्रह र स्वार्थमा गरिने प्रोपगान्डा मात्रै हुन्छ । यहीँनेर कित्ताकाट आवश्यक छ ।
हरेक राजनीतिक पार्टीको संगठन संरचनामा प्रचार समिति वा विभाग हुने गर्छ । त्यही प्रचार संयन्त्रअन्तर्गत पार्टीनिकट पत्रकारहरू संगठित हुन्छन् । प्रचार संयन्त्रले नपुगेर तिनले पार्टीपिच्छे पत्रकारका संगठन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । देशभर तिनै संगठनहरूसँंग जोडिएका पत्रकारको बाहुल्य छ । तिनैमध्ये कैयौं व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासमा पनि छन् । पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेट बलियो हुनुमा पत्रकार बन्ने कि पार्टी कार्यकर्ता भन्ने द्विविधाग्रस्त मनोदशामा भएको यही ठूलो पंक्ति जिम्मेवार छ । यो पंक्तिले खेल्ने भूमिका पत्रकारिता र प्रोपगान्डाबीचको सीमारेखा खिच्न निर्णायक हुनेछ । अनि मात्रै यो इतिहास रच्ने अवसर बन्न सक्छ । पत्रकारका नाममा खुलेका पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूलाई प्रोपगान्डा युनिटमा सीमित गर्दै श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको एउटै संस्था काफी छ भन्ने सन्देश दिने अवसर आएको छ । पत्रकारहरूले त्यो अवसर उपयोग गर्न सक्लान् ?
पत्रकार महासंघलाई कस्ता सञ्चारकर्मीको संस्था बनाउने ? नेतृत्वका आकांक्षीसामु अर्को अवसर पनि छ । के ती सबै पत्रकार हुन्, जो नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य छन् ? के ती सबै पत्रकार हुन्, जसले सूचना विभागबाट प्रेस कार्ड प्राप्त गरेका छन् ? र, के ती पत्रकार होइनन्, जोसंँग प्रेस कार्ड त छैन, तर नियमित सञ्चारकर्म गरिरहेछन् ? यति बेला महासंघलाई यी गम्भीर प्रश्नमाथि घोत्लिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।
मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा हरेक दिन थरीथरीका पत्रकार पुग्छन् । तिनका आ–आफ्नै आग्रह हुन्छन् । तिनलाई मुख्यत: दुई थरीमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । एक, समाचारको खोजीका लागि जाने सक्रिय पत्रकार । दुई, समाचार नलेख्ने पत्रकार । समाचार नलेख्ने पत्रकार एउटा कोट भिरेर कर्मचारी छिर्ने समयमै सिंहदरबार पुग्छ । र, सबैजसो मन्त्रालय चहार्छ । मन्त्री, सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म उसको पहुँच हुन्छ । सरुवा, बढुवा, विज्ञापन, सहयोग आदि विभिन्न एजेन्डा लिएर पुगेको पत्रकारलाई समाचारसंँग कुनै सरोकार हुन्न । पार्टी र नेतासँंगको सम्बन्ध र रवाफका आडमा आफ्नो काम फत्ते गर्ने ध्याउन्न हुन्छ, उसको । अर्को श्रेणीका पत्रकारहरू सिंहदरबार समाचार खोज्न छिर्छन् । र, दिनहुँ केही न केही सूचना लिएर न्युजरुम फर्कन्छन् । महासंघ यी दुई थरी पत्रकारमध्ये कसको नेता हुने ? सञ्चारकर्मीको कि पत्रकारको आवरणमा बिचौलिया बनेकाहरूको ? प्रश्न यो हो ।
नेपालमा कुनै बखत यस्तो थियो, पत्रकारिता र राजनीति एक रथका दुई पांग्रा थिए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलसँंगै पत्रकारिताको भूमिका नजरअन्दाज गर्नै नमिल्ने खालको रह्यो । निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा राजनीति र पत्रकारिताको सम्बन्ध नङ–मासुको जस्तै थियो । २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को, दुवैमा पत्रकारहरू दलसँंगै कुममा कुम जोडेर अघि बढेको तथ्य सधैं स्मरणीय रहनेछ । गौरवपूर्ण विगतमा मात्रै होइन, विकृति र विसंगतिपूर्ण वर्तमानमा पनि नेता र पत्रकार एउटै पंक्तिमा उभिएका छन् । संघर्षका सहयात्री पत्रकारिता र राजनीति आन्दोलनपछिका विसंगतिका संवाहक पनि भएका छन् । प्रवृत्तिगत रूपमा आज राजनीति र पत्रकारिताको हविगत करिब–करिब उस्तै छ ।
गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिता, विधि मिच्ने प्रवृत्ति आदि कारणले राजनीति दूषित हँुदै गएको छ । ठीक त्यस्तै चरित्र पत्रकारहरूको पनि छ । बिट रिपोर्टरदेखि वरिष्ठ पत्रकारसम्मले लेयर–लेयरमा आ–आफ्नै खाले सिन्डिकेट चलाइरहेका छन् । दलीय प्रभाव र आबद्धता रहेका पत्रकारको त कुरै छोडौं, व्यावसायिक भनिएका कतिपय ‘नामचीन’ हरू पनि कोटरी र सिन्डिकेटमुक्त छैनन् । तसर्थ हामी सबैले एकचोटि आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्ने र घोत्लिने समय हो यो ।
राजनीति विकृत हँुदै गएकामा हामी धेरै पत्रकार चिन्तित हुने गर्छौं । नेतालाई सुध्रिन अनेक सुझाव/टिप्स दिनु हाम्रो नियमित कर्ममै पर्छ । तर, के हामी आफ्नै पेसाप्रति त्यति संवेदनशील हुन सकेका छौं ? जुन शुद्धीकरण पत्रकारिताले खोजेको छ, त्यसप्रति हामी किन गम्भीर छैनौं ? महासंघको चुनाव आफूलाई व्यावसायिक पत्रकार भन्नेहरूका लागि परीक्षाको घडी भएर आएको छ ।
यति धेरै खोट देखिएपछि/देखाइएपछि प्रश्न उठ्न सक्छ— के शुद्धीकरणको खाँचो पत्रकारिता र राजनीतिमा मात्रै छ ? अरू पेसा–व्यवसाय समस्या र दोषरहित छन् ? समस्या नेता वा पत्रकारको मात्रै होइन, यति बेला समाजका सबै तह र तप्कामा आ–आफ्नै खाले समस्या छन् । समाजका सबैजसो एकाइ शुद्धीकरणको पर्खाइमा छन् । तर, त्यसो भनेर पत्रकारिताले उन्मुक्ति खोज्न मिल्दैन । त्यो किनभने, यो पेसाको दायित्व अरूका तुलनामा केही बढी छ, संवेदनशील छ । हामी पत्रकार अरूको निगरानी गर्छौं । बाटो बिराउनेलाई किन बिराइस् भनेर औंला ठड्याउने हामी नै हौं । अरूतिर औंला ठड्याउने नैतिक जमिन त्यति बेला बन्छ, जति बेला हामी आफैं कसैले प्रश्न नउठाउने अवस्थामा पुग्छौं ।
यो अवस्थामा पुग्न हामी आफ्ना ‘ब्यागेज’ हरूबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । हामी कतिपय पत्रकार केही न केहीको भारी बोकेरै हिँडेका छौं । हाम्रो पछाडि केही न केही ‘ब्यागेज’ झुन्डिएकै छ । कोही एनजीओको ‘ब्यागेज’ बोकेर कुदिरहेछौं । कोही कुनै दलको ‘ब्यागेज’ बोक्छौं । अहिले त झन् दलबाट पनि झरेर नेताविशेष अथवा व्यक्तिविशेषका ‘ब्यागेज’ बोकेका पत्रकार बढ्न थालेका छन् । धेरै कम पत्रकारसंँग पत्रकारिताको ‘ब्यागेज’ मात्रै छ । किन हामी पत्रकार व्यावसायिक पत्रकारिताको ‘ब्यागेज’ बोक्न सक्दैनौंं ?
सारमा, पत्रकारितामा शुद्धीकरण आवश्यक छ र यसको थालनीमा मुख्यत: दुई कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । एक, पत्रकारितामा दलीय प्रोपगान्डाले स्थान पाउनु हँुदैन । दुई, पत्रकार अनेक खाले ‘ब्यागेज’ बाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । जबसम्म यी अनेक ‘ब्यागेज’ बाट पत्रकार मुक्त हुँदैनन् र व्यावसायिकताको एउटै ‘ब्यागेज’ मात्रै बोक्दैनन्, तबसम्म आङ कन्याउँदा छारो उडिरहन्छ । पत्रकार विवाद र प्रश्नको घेरामा रहिरहन्छ । मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच आई नै रहन्छ । के यो पत्रकार महासंघको चुनाव पत्रकारिताको मर्यादा र प्रभाव जोगाउन सक्षम होला ? के दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध व्यावसायिकताको ‘ब्यागेज’ बोक्ने पत्रकारलाई चुनावले न्याय गर्ला ? कुरौं ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ १९:३५
एमाले : विघटन कि पुनर्गठन
एमालेका प्राथमिकतामा श्रमिक वर्ग होइन, दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू पर्न थाले । बिचौलियाहरूको पहँुच नेतृत्वको शयनकक्षसम्मै हुन थाल्यो । मुद्दाहरूमा चलखेल गर्ने एनजीओ/आईएनजीओमा एमालेको रुचि हुन थाल्यो । सारमा, एमालेको ‘बुर्जुवाकरण’ भयो ।
चैत्र ३, २०७७ राजाराम गौतम
अहिले विभाजन र विघटनको संघारमा उभिएको नेकपा (एमाले) कुनै बखत मुलुकको ऊर्जाशील राजनीतिक शक्ति मानिन्थ्यो । यो पार्टीको यस्तो परिचय बन्नुका पछाडि यसका हजारौं जुझारु कार्यकर्ता थिए । निरंकुशतन्त्र झेलेर आएको जोसिलो नेतृत्वपंक्ति थियो, जो वैचारिक/राजनीतिक कुरा गथ्र्यो । नेतृत्व पंक्तिमा गुट र तिक्तता नभएको होइन तर त्यो अहिलेजस्तो झाँगिएको थिएन ।
२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा वामपन्थीहरूसमेत सम्मिलित जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि मुलुक दलीय राजनीतिको कोर्समा बढ्यो । त्यही क्रममा २०४७ साल कात्तिकमा नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) मिलेर नेकपा (एमाले) गठन भएको थियो ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता, गुट, फुटका अनेक नजीर छन् । पञ्चायती समयदेखि नै नेपाली कम्युनिस्टहरू विभिन्न समूहमा विभक्त भएर आ–आफ्नै ढंगले संघर्षरत थिए । तीमध्ये झापा विद्रोहको पृष्ठभूमिको माले अरू समूहभन्दा प्रभावशाली थियो । नेकपा (माक्र्सवादी) पुराना कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा थियो । यी दुई पार्टीबीचको एकताले एमाले जन्मायो ।
२०४६ सालपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा एमालेले २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६९ सिट जितेर मूलधारको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा आफूलाई दर्ज गर्‍यो । कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो भने एमाले बलियो प्रतिपक्षी दलका रूपमा उदायो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावबाट पहिलो ठूलो दल हुँदै अल्पमतको सरकार बनाउँदासम्म एमाले बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो । नेपालमा कम्युनिस्टहरू निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेका थिए । दुनियाँकै लागि नेपालका कम्युनिस्ट नजीर बनेका थिए । विश्वका धेरै ठाउँमा कम्युनिस्ट सत्ता ढलिरहँदा नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट कम्युनिस्टहरू विजयी हुँदै थिए । एमालेमा यसरी जनमत ओइरिनु र यो बलियो हुनुका केही तात्कालिक कारण थिए । जस्तो,
१. २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिमा एमालेप्रति जनआकर्षणको मुख्य केन्द्र महासचिव मदन भण्डारी थिए । अद्भुत भाषणकला भएका भण्डारी राजनीतिक/वैचारिक रूपले पनि अब्बल थिए । उनले एमालेमार्फत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिए । उनले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को राजनीतिक कार्यक्रम अघि सारेर कम्युनिस्टहरू पनि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अटाउन सक्छन् भन्ने सन्देश मात्रै दिएनन्, राजनीतिक रूपान्तरणको गतिलो मार्गसमेत कोरिदिए । त्यही बाटो हिँडेर एमाले बलियो शक्तिका रूपमा उदायो ।
२. लोकप्रियताको सिँढी चढ्दै गरेका मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि ‘शोकलाई शक्तिमा बदल्ने’ प्रण गर्दै अघि बढेको एमालेले सहानुभूतिको समर्थन पनि उत्तिकै पायो ।
३. त्यो बखत एमालेले अघि सारेका राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाले यो पार्टीलाई जनतासँग जोडेको थियो । एमाले वर्गीय स्वार्थको कुरा गथ्र्यो; मजदुर, श्रमिक, पेसागत संघ–संगठन, विद्यार्थी र आमजनताका भाका बोल्थ्यो । चप्पल पड्काउँदै काठमाडौं छिरेको जमातले यो पार्टीको नेतृत्व गथ्र्यो । त्यो जमात सुविधाभोगी भइसकेको थिएन अर्थात् दलाल पुँजीवादको चंगुलमा परिसकेको थिएन ।
४. एमाले बलियो हुनुका पछाडि यसको व्यवस्थित र जुझारु कार्यकर्ता पंक्तिको पनि भूमिका रह्यो । ‘क्याडर बेस्ड’ पार्टी भएकाले यसको संगठन बलियो देखिन्थ्यो ।
५. प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि जनताले कांग्रेससँग अपेक्षा राखेका थिए । बहुमत पाएको कांग्रेस सत्ताको खिचातानीमा फस्यो । पदीय भागबन्डा नमिल्दा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलियो । सुशासन कायम गर्न नसकेको मात्रै होइन, जनताका दैनन्दिन समस्याको सम्बोधन पनि गर्न नसकेपछि कांग्रेसप्रति जनताको मोहभंग भयो । कांग्रेसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन र मुलुक मध्यावधि चुनावमा गयो । र, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा एमाले रोजाइमा पर्‍यो ।
२०५१ सालको एमालेको नौमहिने सरकारले केही दुरगामी प्रभावका कार्यक्रम ल्यायो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, वृद्ध भत्ताजस्ता केही कार्यक्रमको ‘व्याज’ एमाले नेताहरू अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । नौमहिने सरकारमा जाँदासम्म एमाले ठीकठाकै थियो । शक्तिआर्जन गरेसँगै उसले आफ्नो प्राथमिकता सत्तालाई बनायो ।
संसदीय राजनीतिमा दलले सत्तामा जान खोज्नु र आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन तर सत्तामा जान जे पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ स्वाभाविक होइन । एमाले सत्तामा जान मरिहत्ते गर्न थाल्यो । कतिसम्म भने, सत्ताकांक्षाले नै २०५४ सालमा यो पार्टीका नेताहरू विभाजनको तहसम्म ओर्लिए । २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्मको संसदीय राजनीतिलाई विकृत पार्न कांग्रेसको बढी भूमिका रह्यो । तर, एमाले पनि यसमा अछुतो रहेन; ‘भाइ कांग्रेस’ कै भूमिका निर्वाह गर्दै सत्तामा पुग्न सांसद थुन्नेदेखि पार्टी विभाजन गर्नेसम्मका हर्कत गर्न पछि परेन ।
मदन भण्डारीको अवसान र मनमोहन अधिकारीको अभिभावकत्व गुमेको एमालेमा निम्नपुँजीवादी मनोग्रन्थी भएका नेताहरू हाबी भए, जसले विगतमा उठाएका मुद्दा छोड्दै गए । जनजीविका र वर्ग उत्थानका ठुल्ठूला गफ हाँक्ने एमालेहरू आफ्नै निजी जीवन उकास्ने ध्याउन्नमा जुटे । चप्पल पृष्ठभूमिका नेताको जीवनशैली फेरिन थाल्यो । विचारको बहसमा कमी हुन थाल्यो । तत्कालको पदीय लाभहानि नेतृत्वको मुख्य सरोकारको विषय भइदियो । पहिले वैचारिक आवरणमा गुटहरू हुन्थे, अब नेताकेन्द्रित गुट हुन थाले । एमालेका प्राथमिकतामा श्रमिक वर्ग होइन, दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू पर्न थाले । बिचौलियाहरूको पहुँच नेतृत्वको शयनकक्षसम्मै हुन थाल्यो । मुद्दाहरूमा चलखेल गर्ने एनजीओ/आईएनजीओमा एमालेको रुचि हुन थाल्यो । सारमा, एमालेको ‘बुर्जुवाकरण’ भयो ।
एकातिर एमाले राजनीतिक रूपमा च्युत हँुदै थियो भने, अर्कातिर यसको सांगठनिक सञ्जाल पनि खुम्चँदै थियो । माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र विद्रोहका बेला कांग्रेस, एमाले, राप्रपाजस्ता दलहरू सदरमुकाम हुँदै ठूला सहरमा सीमित थिए । बलियो संगठन भएको एमाले पनि खुम्चेर सदरमुकाममै सीमित थियो । माओवादीले संसदीय शक्तिसँग मिलेर अघि बढ्ने बाह्रबुँदे समझदारी गरेपछि मात्रै हो, यी दलहरूले राहत अनुभूति गरेको । माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणसँगै फेरि एमालेले फुक्ने अवसर पायो । तर, खुला राजनीतिमै अर्को कम्युनिस्ट शक्ति चुनौतीका रूपमा उभिइसकेको थियो ।
२०४६ सालपछि एमाले जस्तो भरभराउँदो थियो, २०६३ सालपछिको माओवादी त्यस्तै थियो । एक त, २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता आदि माओवादीका मुद्दा थिए । कुनै समय संविधानसभाको मुद्दा कांग्रेस र एमालेले पनि उठाएका थिए तर २०६३ सालपछि ती माओवादीका मुद्दा थिए । कांग्रेस र एमाले ती मुद्दाको पछि लाग्न बाध्य थिए । अर्को, जनता हिंसाको राजनीतिबाट दिक्दार थिए । जसरी पनि माओवादी पुन: हिंसाको बाटोमा नजाओस् भन्ने आम सदाशय थियो । फलत: पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । एमाले तेस्रोमा खुम्चियो ।
जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमा एमालेको भूमिका नभएको होइन । यसबीच बनेका गठबन्धन सरकारहरूमा एमाले पनि सहभागी थियो । गठबन्धन सरकारको पटकपटक नेतृत्व लिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा मनग्गे प्रभाव पार्न सकिरहेको थिएन । एमालेको लिङ्ग कुन हो ? कतिपय मुद्दामा यो पार्टी अनिर्णयको बन्दी भइदिँदा आलोचकहरू प्रश्न गर्थे ।
माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रमुख भूमिका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेलाई साथ लिएर खेलेका थिए । उनले अन्तरिम व्यवस्थापिकामा एमालेको बराबरको हैसियत माओवादीलाई पनि दिएपछि दुई ठूला कम्युनिस्ट त्यहीँदेखि आमने–सामने भएका थिए । दुवैले एकअर्कालाई आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी ठान्थे । खास गरी माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि ‘आफ्नो स्पेस’ गुम्ने भय एमालेमा थियो ।
समस्या माओवादीभित्र पनि थियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणका क्रममा यो पार्टीभित्र अनेक आन्तरिक समस्या देखिए । विभाजन र विग्रहका शृंखला यसबीच माओवादीले खेप्यो । सुरुवाती दिनमा राजनीतिक रूपान्तरणमा आनाकानी गरे पनि अन्तत: माओवादी संसदीय राजनीतिमै आयो । शनै:शनै: माओवादी ‘नयाँ एमाले’ मा रूपान्तरित हुँदै गयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हाईहाई भएको माओवादीलाई दोस्रो संविधानसभामा जनताले ‘साइज’ मा ल्याइदिए ।
अनेक राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद अन्तत: मुलुकले संघीय गणतान्त्रिक संविधान पायो । यसबीच विग्रह र विभाजनबाट माओवादी कमजोर हुँदै गयो भने उता एमाले ‘रिभाइभ’ हुँदै थियो । पछिल्लो कालखण्डमा एमाले ‘रिभाइभ’ हुनुमा ओलीको भूमिका देखियो ।
२०६३ सालको आन्दोलनमा छड्के किनाराका साक्षी बनेका ओली केही वर्षयता प्रभावशाली नेताका रूपमा देखिए । सुरुमा माओवादी उग्रवामपन्थको चर्को विरोधी देखिएका उनै ओलीले माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकतासम्म गर्न भ्याए । २०७१ साल असारमा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी २०७२ साल असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने ।
उनी प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकको राजनीति अत्यन्त प्रतिकूल थियो । संविधान जारी गर्दा ‘नपुछेको’ भनेर भारत चिढिएको थियो । संविधान जारी गर्ने मिति सार्न अनेक प्रयत्न गरेको भारतले नसकेपछि आखिर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो, जसको ओलीले डटेर सामना गरे । चीनसँग पट्रोलियम ढुवानीसँगै पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ आयाम थपे । पार्टीभित्र गुटबन्दी र सानो कोटरी चलाउने नेताको छवि भएका ओली कुशल नेतामा दरिए । त्यही साखको आडमा आमचुनावको परिणाम उनले आफ्नो पोल्टामा पारे । त्यसमाथि कम्युनिस्टहरूबीच कार्यगत हुँदै पार्टीगत एकता गर्न सकेका उनको व्यक्तित्व उचाइ–उन्मुख थियो । लामो समयपछि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेकाले धेरैले अब मुलुकमा केही हुने भयो भनेर आस गर्न थालेका थिए ।
तर, जब उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए उनको त्यो छवि र साख गुम्यो । शक्ति–उन्माद र अहंकारले उनलाई यति धेरै छोप्यो, आफूले जे गरे पनि ठीक भन्ने आत्मरतिको बन्दी बने । यद्यपि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको राजनीतिक आधार प्रस्ट थिएन, न त्यो एकता कुनै विधि र प्रक्रियाअनुरूप भएको थियो, छापामार शैलीमा भएको एकता रहस्यमय थियो, तथापि लामो समयपछि मुलुक राजनीतिक स्थिरताको बाटामा हिँड्ने भो भनेर आमरूपमा त्यो एकताको स्वागत भयो ।
ओलीले कम्युनिस्ट एकतालाई सत्ताको भर्‍याङ मात्रै बनाए । जब उनको कार्यशैली र प्रस्तुतिमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो, उनले एकता नै भंग गरिदिए । एकीकृत कम्युनिस्ट शक्ति अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । कोभिडको चपेटाबाट तंग्रिँदै गरेको मुलुक सत्तारूढ दलभित्रको घरझगडाले बन्धकजस्तै भएको छ । ओलीले न पार्टीलाई समन्वय गरेर हाँक्न सके, न सरकार नै । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष— शक्ति र सत्ता हत्याउन उनी जुनसुकै तहमा ओर्लन तयार देखिए । आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरे । अदालतले उसको सिफारिस बदर गरेर नैतिक रूपमा परास्त गरिदियो । त्यो फैसलाले उनलाई छोएन । उनी आफैंले गरेको पार्टी एकता अदालतले बदर गरिदियो । उनले नैतिकता च्युत भएको महसुस गरेनन् । आज पनि उनको कुनै प्रयत्न विधि पद्धति बचाउने, आफू उभिएको राजनीतिक जमिन बचाउने, उपलब्धि रक्षा गर्नेतिर छैन । राजनीतिक दाउपेचकै आधारमा सत्तामा टिकिरहने सोचमा देखिन्छन् ।
ओलीको दाउपेचको मारमा परेका एमाले नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति यतिखेर बिलखबन्दमा छ । यो समूह पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यको असुरक्षालाई लिएर मात्रै चिन्तित देखिन्छ, जबकि पार्टी नै जीवनमरणको दोसाँधमा छ । एमालेको आजको यो हबिगतको दोषी एक्ला ओली होइनन्, सिंगो एमाले पंक्ति यसमा जिम्मेवार छ । पार्टीले विधि, पद्धति र आफ्नो राजनीतिक जमिन छोड्दा बेवास्ता गर्ने पंक्ति यसमा जिम्मेवार छ ।
जे रोप्यो, फल्ने त्यही हो । अस्वस्थ राजनीति र गुटबन्दी रोप्ने अनि आदर्श दलको अपेक्षा गर्ने ? आज पनि एमालेसँग लाखौं कार्यकर्ता छन्, केन्द्रदेखि वडासम्म जनप्रतिनिधि छन् तर ती जुझारु रहेनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका शब्दमा, ‘लम्पट’ कार्यकर्ताका कारण नेतृत्व छाडा भएको हो । अझ, आस गरिएका दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका नेताहरू नै वृद्ध नेतृत्वको चाकर बन्न तँछाडमछाड गर्ने प्रवृत्तिले निकै पहिले भइसक्नुपर्ने एमालेको पुनर्गठन थाती रहँदै आयो । अहिले फेरि एमाले विघटनको संघारमा छ । यसलाई मर्न दिने कि फेरि नयाँ शिराबाट पुनर्गठन गर्ने ? एमालेसामु यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।
(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)
प्रकाशित : चैत्र ३, २०७७ २०:३४
लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि नेतृत्व परिवर्तन
आमाले सिकाउनुभएको नारीवाद
रेबिजबाट जोगिन खोप अनिवार्य
राजदूत : एक नियमित आकस्मिकता
जनगणनाका छ प्रश्‍न
TOP DEALS ON DARAZ DASHAIN DHAMAKA
Save Rs. 5000 | Use code DDSLASH5000
Save Rs. 3.5K | Use code DDSLASH3500l
Panasonic F L Washing Machine
Buy at Rs. 50.9K | Use code + Rs. 2k Card Discount
‘प्रचण्ड’ को अवरोह कहाँ टुंगिएला ?
सरिता तिवारी आश्विन ११, २०७८
‘प्रचण्ड’ बाट पुष्पकमल दाहालको कायापलटका आयाम र पत्रहरू कति होलान् ? उत्पीडित वर्ग/समुदायका नाममा लडिएको युद्ध र सत्तारोहणपछिको राजनीतिक ध्रुवबीच प्रचण्डको क्रमिक ‘दाहालकरण’ कसरी भयो...
रामचन्द्र पौडेल आश्विन ११, २०७८
नेपाली कांग्रेस अहिले चौधौं महाधिवेशनको प्रक्रियामा जुटेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा महाधिवेशनको अर्थ नबुझ्ने त कोही नहोला, तर यक्षप्रश्न हामीले महाधिवेशनमार्फत पार्टीले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त, त्यस...
मधु राई आश्विन ११, २०७८
‘नारीवादी हुर्काइका लागि मुरीमुरी धन्यवाद तपाईं दुवैलाई ।’ केही दिनअघि छोरीले चिमामान्डा ङ्गोजी आदिचेका दुई पुस्तकको सिरानमा यस्तो लेखेर पठाइन् ।
सुरेन्द्र कार्की आश्विन ११, २०७८
रेबिज मानव सभ्यताले झेल्दै आएका पुराना रोगहरूमध्ये पर्छ, तैपनि अझै यसबाट विश्वभरि बर्सेनि ५९ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइरहेको अनुमानित तथ्यांक छ । नेपालमा पनि बर्सेनि...
सम्पादकीय आश्विन ११, २०७८
विशेषतः राजनीतिक आस्था तथा पहुँचका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिने नेपालको प्रचलनमा त्यस बेला मात्रै प्रश्न उठ्ने गर्छ, जब सरकार फेरबदल र राजनीतिक परिवर्तनको अवस्था आउँछ ।...
भास्कर गौतम आश्विन १०, २०७८
जनगणना टाउको गन्ने विद्या मात्र होइन, समाजलाई विज्ञानसम्मत तवरमा वर्गीकरण गर्ने ज्ञानसमेत हो । त्यसैले कुनै पनि देशमा जनगणना सजिलो कार्य होइन । नेपालजस्तो सांस्कृतिक...
युवाको दृष्टि : नेता होइन नीति
दधि अधिकारी आश्विन १०, २०७८
भनिन्छ, राजनीतिमा शक्ति र पद कसैले दिएर प्राप्त हुँदैन, यो त छिनेर लिन सक्नुपर्छ । तर छिन्ने तरिका भने समाज र देशअनुसार फरकफरक हुन्छ ।...
अर्थ बांगिनुको पीडा भोग्दै ‘नौटङ्की’
रमेश रञ्‍जन आश्विन १०, २०७८
अरूलाई झूटा, फरेबी, असत्य बोल्ने, सत्यलाई प्रकट हुन नदिने, बेइमान आदि नकारात्मक टिप्पणी गर्दा नौटङ्की शब्दको प्रयोग हुने गरेको छ । सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रका टिप्पणीकर्ताका...